नेपाली भू-भाग सुस्तामा एसएसबीद्वारा ड्रोनमार्फत् सीमा अनुगमन! « News24 : Premium News Channel
नेपाली भू-भाग सुस्तामा एसएसबीद्वारा ड्रोनमार्फत् सीमा अनुगमन!
पूर्वी नवलपरासी । नेपाली भू-भागमा सुस्तामा भारतीय सीमासुरक्षा बल एसएसबीले ड्रोनमार्फत् सीमा अनुगमन गरेको छ । त्यहाँका स्थानीयका अनुसार सुस्ता गाउँपालिका-५ को १ नम्बर ठोक्कर नजिकबाट एसएसबीको टोलीले नेपालतर्फ ड्रोन क्यामरा उडाएर नापजाँंच गरेको हो ।
सुस्तामा निर्माणाधीन झोलुङ्गे नजिकैबाट अर्धसैनिक बलका एक दर्जन सुरक्षाकर्मीले नेपाली भू-भागमा ड्रोन उडाएर फोटो खिचेको स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूले नेपाली भू-भागको नक्साङ्कन गरेको हुनसक्ने स्थानीय बताउँछन् ।
स्थानीयका अनुसार आइतबार (आज) दिउसो १२ बजेपछि उनीहरूले सीमावर्ती सुस्ता क्षेत्रमा ड्रोन उठाउने र अन्य उपकरणको प्रयोग गरेर नेपाली भू–भागको नक्साङ्कन गरेको हो । नेपाली भू-भागमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले ड्रोन उडाएको देखेपछि हेर्न जाँदा एसएसबीले नजिक नआउन चेतावनी दिएको बताइएको छ ।
यसबारे सुस्तास्थित प्रहरी चौकीमा खबर गरेपनि प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्ने काम नगरेको स्थानीयको भनाइ छ ।